Mulkiilaha Chelsea oo ka hadlay Cunsuriyad lagula kacay Reece James | Berberanews.com
Home CAYAARO Mulkiilaha Chelsea oo ka hadlay Cunsuriyad lagula kacay Reece James
Ciyaaro-(Berberanews)-Milkiilaha Chelsea Roman Abramovich ayaa fariin taageero ah u qoray Reece James iyo ciyaartoyda kooxda koowaad ka dib markii lagu cunsuriyadeeyay baraha bulshada.
Ninka reer Russia, oo 54 jir ah, ayaa sidoo kale wacad ku maray inuu kordhin doono maalgelinta ka caawiya naadiga inay wax ka qabato takoorka.
“waxaan ka naxay xadgudubka cunsuriyada ah ee Reece loogu badhtilmaameedsaday baraha bulshada, ”ayuu yidhi Abramovich.
“Ma ogolaan karno in tani ay sii socoto iyada oo aan la xakameynin.” James wuxuu ka mid ahaa ciyaartoy dhowr ah oo dhawaanahan lagu cunsuriyadeeyay baraha bulshada.
Jimcihii la soo dhaafay, West Brom waxay booliska kala xidhiidhtay farriin la sheegay inay cunsuriyad ku dheehan tahay oo loo diray ciyaaryahanka khadka dhexe ee Romaine Sawyers, iyadoo booliska West Midlands ay xaqiijiyeen qabashada hal nin.
Ciyaartoyda Manchester United Axel Tuanzebe iyo Anthony Martial ayaa sidoo kale lagu cunsuriyadeeyay baraha bulshada ka dib guuldaradii Arbacadii hore ka soo gaadhtay Sheffield United.
“bani’aadamnimada iyo baraha bulshada meeshii ugu xumeyd” madaama uu cunsurinimo kula kacay internetka. Abramovich ayaa intaas ku daray: “Waan ogahay in dhowr ka mid ah ciyaartoydeena ay badhtilmaameedsadeen naceyb iyo takoorid baraha bulshada.
“Waxay ii tahay naxdin in maalmo uun ka dib markii aan xusnay Maalinta Xusuus-dhiska Holocaust, innaga bulsho ahaan uma muuqanno inaan barannay casharradii laga bartay wixii naga soo maray iyo cawaaqibyada ay nacaybka iyo takoorku ku yeelan karaan.
“Waxaan faray gudiga inay sii kordhiyaan dadaalka naadiga ee ku aadan arimahan shaqsi ahaana waxaan u jiheyn doonaa lacago dheeri ah oo ku wajahan shaqadan muhiimka ah. Waxaan soo bandhigi doonnaa wax qabadkeena koox ahaan maalmaha soo socda.”
Previous articleMilateriga Myanmar oo la wareegay xukunkii dalkaas
Next articleMadaxweynaha Somaliland oo ka qayb-galay Xuska Sannad-Guurada 27aad Ee Aas-Aaska Ciidanka Qaranka